Izinkinga zokugembula | December 2019
Main Izinkinga zokugembula
Amageyidala amadala asadlalwa: ingxenye 2
Ingxenye yesibili yokukhethwa kwamageyimu amadala okwamanje adlalwe kuhloswe ukugcwalisa lesi sihloko, okufaka amaphrojekthi angu-20 emangalisayo kusukela eminyakeni eyedlule. Abashumi abayishumi abaphezulu babebadubuli abahle, amasu nama-RPG. Manje sebebhekwa njengomunye wabamele abakhulu behlobo lwabo. Lezi amaphrojekthi ziheha ukunakwa kwabadlali, naphezu kokukhona kwama-analogues angaphezulu kakhulu we-moderne.
Isofthiwe yokudala imidlalo ye-2D / 3D. Indlela yokudala umdlalo olula (isibonelo)?
Sawubona Amageyimu ... Lezi enye yezinhlelo ezidumile kakhulu lapho abasebenzisi abaningi bethengela khona amakhompyutha nama-laptops. Mhlawumbe, ama-PC ayengeke athandwe kakhulu uma kungekho midlalo kubo. Futhi uma ngaphambili, ukuze udale noma yimuphi umdlalo, kwakudingeka ukuba ube nolwazi olukhethekile emkhakheni wokuhlela, amamodeli wokudweba, njll.
Amakhadi angu-11 e-FIFA angu-19 abadlali abakhetha kaningi
I-FIFA 19 - i-simulator yezemidlalo ethandwa kakhulu evumela abadlali ukuthi babonge imodi yokuzikhandla yokusebenza kanye nempi yokulutha emidlalweni ye-Ultimate Team. Ekupheleni kuka-2018, abadlali bakwazi ukuchitha amakhulu ezinkulungwane zempi emasimini ajwayelekile, besebenzisa izingoma ezihlukahlukene. Kodwa-ke, emphakathini wokudlala kukhona ukuthambekela kokuthatha abadlali abathile kuzo zonke izikhundla.
I-Steam_api.dll ayitholakali ("steam_api.dll ayitholakali kusuka kukhompyutha yakho ..."). Okufanele ukwenze
Usuku oluhle. Ngicabanga ukuthi abathandi abaningi begeyimu bajwayele uhlelo lwe-Steam (okukuvumela ukuba usebenzise kalula imidlalo futhi ngokushesha uthenge imidlalo, thola abantu abafana nabantu futhi udlale ku-intanethi). Sizoxoxa ngalesi sihloko ngesiphambeko esisodwa esithandwayo esiphathelene nokungabikho kwefayela le-steam_api.dll (uhlobo olujwayelekile lwesiphambeko lunikezwe kumdwebo.
Imidlalo Yabadlali Abayishumi Abaphezulu Abangu-2018
Kungakhathaliseki ukuthi ukuhlakanipha okuhlakaniphile nokuhlakanipha kungenziwa kanjani, kuhlale kuthakazelisa ukuncintisana nabantu bangempela. Amanye amageyimu wanamuhla ahlotshaniswa amamodi e-intanethi, kanti amanye asekela abadlali abaningi, ukuze ngemuva komkhankaso womdlali oyedwa, abadlali banokuthile okumele bakwenze. Ezinyangeni eziyishumi nambili ezedlule, kube khona amaphrojekthi ambalwa athokozisayo, okuvelele kunazo zonke ezithinta imidlalo eyishumi ephezulu yabadlali abaningi ka-2018.
Okuyishumi okulindeleke kakhulu ku-2019 imidlalo ye-PS4
Elinye lama-platforms adumile kakhulu wokudlala, i-PlayStation 4, lindele inani le-premieres eliphezulu eliphezulu kwi-2019 entsha, phakathi kwalapho kunendawo ye-multiplatform namaphrojekthi akhethekile. Emidlalweni eyishumi ephezulu kakhulu engalindelwe ku-PS4 yizithunywa ezifunwa kakhulu zezinhlobo ezahlukene kubalandeli be-console evela ku-Sony.
Amageyimu we-Steam aphezulu aphezulu: Abaholi Abayishumi Abaphezulu
Abantu abaningi bathanda ukudlala imidlalo ngesakhiwo esithakazelisayo nesithakazelisayo. Namuhla, ukuthandwa okukhulu sekufikile emidlalweni yamahhala ku-Steam, okungcono kunazo zonke ezihlanganisiwe zibe yizikhundla eziphezulu eziyishumi. Okuphakathi I-APB Ilayishwe kabusha i-TrackMania I-Track Track Exilitors Iqembu Elihambelayo Emdlalweni okumele ubambe iqhaza empi ye-PvP enamandla, ulwe nokuqhubeka kweqembu, uthole ukuthembeka ngezinhlangano ezihlukahlukene .
Ukuthengwa okungekho: imisebenzi eyishumi ebiza kakhulu emlandweni wemidlalo ye-intanethi
Amageyimu e-inthanethi aheha abasebenzisi amahora amaningi we-gameplay, futhi isici sokuncintisana sibenza baqeqeshe amakhono abo futhi baqinisekise ubukhulu babo ngaphezu kwabanye. Ngesinye isikhathi, abadlali abanesithakazelo ngenqubo yokugaya kanye ne-PvP, abafuni nje kuphela ukuba abahle kakhulu, kodwa futhi ukubheka kuqala emdlalweni, babe nesikhali esiyingqayizivele noma ukuthutha komuntu siqu okungekho omunye onakho.
Izimfuneko zesistimu ezishicilelwe zomdlalo I-Division 2
I-studio Ubisoft ichazwe ngokuningiliziwe izidingo zesistimu yomdlalo I-Division 2. Abathuthukisi baye bakhicilela amagama ezingxenye zomdlalo ngo-1080p kuma-30 no-60 ama-FPS, kanye ne-gameplay yama-RPPS angu-60 ku-1440p no-4K isinqumo. Abadlali abancane badinga ukusebenzisa i-Windows 7 futhi entsha. Ngomvuthwandaba wezinyunithi ezingu-30 ezine-Full HD picture, i-AMD FX-6350 noma i-Core i5-2500k ifaneleka njengeprosesa.
I-DirectX: 9.0c, 10, 11. Indlela yokunquma inguqulo efakiwe? Ungasusa kanjani i-DirectX?
Ukubingelela kubo bonke. Mhlawumbe, abaningi, ikakhulukazi abalandeli bemidlalo yekhompiyutha, baye bezwa ngohlelo olunjalo oluyimfihlakalo njengo-DirectX. Ngendlela, kuvame ukuzalelwa ngemidlalo futhi emva kokufaka umdlalo ngokwawo, unikeza ukuvuselela inguqulo ye-DirectX. Kulesi sihloko ngingathanda ukuhlala eminye imininingwane emibuthanweni ehlangene kakhulu mayelana ne-DirectX.
Uyini umehluko phakathi kwezinguquko ezivamile ze-PS4 Pro ne-Slim
Amakhuphoni wegeyimu inikeza ithuba lokuzicwilisa ku-gameplay ethakazelisayo ngehluzo eliphezulu nezwi eliphezulu. I-Sony PlayStation ne-Xbox bahlukanisa imakethe yokudlala futhi baba yinto yokuphikisana okuqhubekayo phakathi kwabasebenzisi. Izinzuzo kanye nokungahambi kwalezi zinduduzo, siyaqonda izinto zethu zangaphambilini. Lapha sizokutshela indlela i-PS4 evamile ehluke ngayo izinguqulo ze-Pro ne-Slim.
Ithimba le-XXIII elithunyelwe ngeviki FIFA 19
Abathuthukisi beFIFA 19 kusukela ku-EA studio banikezwa abadlali bethimba le-XXIII leviki. Amaqhawe evikini eledlule afinyelele kulo, akwazi ukuletha amaqembu abo ukunqoba emidlalweni yezemidlalo. Okuqukethwe Ukwakhiwa kweqembu le-XXIII leviki I-FIFA 19 Abadlali be-Goal Central Abakwesokunxele Kwangasese Abangeneleli be-lateral Central I-winger kwesokunxele I-Right Winger Ingxenye ye-Bench spare part Ukuhlanganiswa kweqembu le-XXIII yeviki I-FIFA 19 - Umlindi Ngesango leqembu leviki nguJan Cloud.
Imidlalo eyishumi ephezulu kakhulu ye-Xbox 2018
Imidlalo engcono kakhulu ku-Xbox One ngo-2018 ivumele abasebenzisi ukuthi bahambe uhambo olude befuna amagugu e-pirate, ukuba babe ngabasizi bezithunywa zezimali ekuphenyweni kwezinto eziyinkimbinkimbi, futhi bangene ezindabeni zokuthula kuphela - ukuba babe abalimi abalula okwesikhashana, ngubani bayayithengisa ngokwabo.
Okulindelwe ngoNovemba 2018: imidlalo yamahhala yabobhalisile be-Xbox Live Gold
Ukubhaliselwa kwe-Xbox Live Gold okukhokhelwe kunesethi yonke yezinzuzo ezithakazelisayo kubadlali. Futhi, mhlawumbe, okuthakazelisayo kunazo zonke kuyisethi yamasonto onke njengesipho, ngenxa yokuthi ungagcina imali ehloniphekile. Isibonelo, kule nyanga, abanikazi benhlanhla yemidlalo yamahhala ye-Xbox Live Gold ngoNovemba 2018 bazosindisa ama-ruble angu-4246.
Imidlalo eyishumi yekhompiyutha ethandwa emantombazaneni
Akukhona nje kuphela ukuthi abantu bangakwazi ukunqoba umhlaba wekhompyutha bese begcwalisa ikhono! Amantombazane ayethanda imidlalo, futhi ukhetho lwabo luvame ukuwela emiphakathini ejulile, emkhathini nasemkhathini wezinhlobonhlobo ezahlukene kanye neminyaka yokukhululwa. Yimiphi imidlalo ethandwa kakhulu kwi-PC ngo-2018 yamantombazane ayethandwa kakhulu? Sithuthukise ama-portals wokusakaza kanye nezibalo zamasevisi adlalayo adumile, ngakho-ke silungele ukwabelana ngokubheka kwethu!
Izikhombisi-ndlela zezemidlalo ezingu-5, ezithandwa phakathi kwabesifazane besifazane
Kwenzeke ukuthi isithombe sesidlali sekhompiyutha evame ukuhlotshaniswa nentsha noma insizwa ehlala njalo iphuma ngaphandle kolwandle ngesikhala samahhala, esisebenzisela abadubulayo, amaqhinga kanye ne-RPG inthanethi. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi abesifazane abaneminyaka ehlukene abayilutha emidlalweni yekhompyutha.
Ungafunda kanjani ama-FPS emdlalweni? Yiziphi i-FPS okumelwe ibe yinto yokunethezeka
Usuku oluhle. Ngicabanga ukuthi wonke umthandi wezemidlalo (okungenani ngesipiliyoni esincane) uyazi ukuthi i-FPS iyiyi (inani lamakheli ngesigamu). Okungenani, labo ababhekene nama-brakes emidlalweni - bayazi ngokuqinisekile! Kulesi sihloko Ngifuna ukucubungula imibuzo ethandwa kakhulu mayelana nale nkhomba (indlela yokwazi, indlela yokwandisa ama-FPS, ukuthi kufanele kube yikuphi, ukuthi kungani kuncike njalo njalo.
Imidlalo eyishumi kakhulu kunazo zonke ngo-2018
Unyaka wezi-2018 wanikeza imboni yezemidlalo imiklamo eminingi yekhwalithi kanye neyenguquko. Noma kunjalo, phakathi kwezemidlalo ethembisayo yizo ezingenelise ngokwanele amageyimu. Ukugxeka kokugxeka nokubuyekezwa okwenyanyekayo kwawela njenge-cornucopia, futhi abathuthukisi bagijimela ukuze benze izizathu futhi bahlenge izinto zabo.
Imidlalo eyishumi kakhulu ekulindelwe kaNovemba 2018
Abathuthukisi baye bafaka izinto eziningi ezithakazelisayo ngenyanga eyedlule ekwindla. Phakathi kweminye imidlalo ekulindelwe kakhulu kaNovemba 2018 yimiidlalo yesenzo, abadubulayo, ama-simulators, nokuzijabulisa. Ngosizo lwabo, abadlali badluliselwa emaeplanethi aqhelekile, emazweni omhlaba futhi kwezinye izikhathi. Uhlu Lokuphakathi Top 10 Okulindeleke Kakhulu I-November 2018 Imidlalo Yezempi V Fallout 76 Hitman 2 Underkorld Spyro I-Triple Trilogy 11-11: Imemori Ibuyisela Imidlalo Ephezulu Eningi Ekulindeleke NgoNovemba 2018 Amanye amageyimu omude aselinde isikhathi eside usuvele uvele.
Ithimba le-XX leviki le-FIFA 19
U-EA wethule iqembu le-XX leviki kwi-simulator ye-FIFA 19. Abadlali abazibonise emdlalweni wangempela webhola bathola indawo eqenjini elingokomfanekiso kanye nekhadi eliphuthumayo lemodi ye-Ultimate Team. Ubani nokuthi yikuphi okufanele kufinyelele ku-TOP-11 futhi ufike ebhentshini manje? Ithebula lokuqukethwe Abadlali abaphezulu be-20 bethimba le-FIFA 19 Umdlali wezemidlalo ongaphakathi we-Defender Central Left wesikhashana Umdlali wesidlali sase-lateral Umdlali wesokunxele Kwesokunxele Abadlali abaphezulu be-Striker Top of team ye-XX FIFA 19 - Goalkeeper Goalkeeper Nice Argentinian Walter Benitez.
https://termotools.com zu.termotools.com © Izinkinga zokugembula 2019